ထိုကဲ့သို့သောစာသားကိုအဖြစ် SarcoidosisUK က်ဘ်ဆိုက် (www.sarcoidosisuk.org) နှင့်ယခင်က်ဘ်ဆိုက် Sarcoidosis နှင့် Interstitial အဆုတ်အစည်းအရုံး ( "သီလ") ဝက်ဘ်ဆိုက် (www.sila.org.uk) နှင့်အွန်လိုင်းဖိုရမ်တစ်ခု (sarcoidosis.ning.com) ရဲ့ contents, , ဂရပ်ဖစ်, ပုံများ, နှင့်အခြားပစ္စည်းများ, ( "အကြောင်းအရာ") သတင်းအချက်လက်များအတွက်သာရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်သို့မဟုတ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်န်ဆောင်မှုများဆပ်မထားဘူး။ ဒီ web site ကိုမှတဆင့်ပေးအပ်သတင်းအချက်အလက်များမဆိုကျန်းမာရေးပြဿနာသို့မဟုတ်ရောဂါရှာဖွေရေးသို့မဟုတ်ကုသမှုအတွက်အသုံးမပြုသင့်ကြောင်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်စောင့်ရှောက်မှုများအတွက်အစားထိုးမဟုတ်ပါဘူး။ အဆိုပါအကြောင်းအရာသာသတင်းအချက်အလက်များအတွက်ထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်။ အားလုံးအကြောင်းအရာများအသုံးပြုမှုသင်၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူနဲ့စကားစတင်ကန့်သတ်သည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သင် SarcoidosisUK ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ဖတ်ပြီးပါပြီတစ်ခုခုကရှာကြံအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆေးပညာဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်သို့မဟုတ်နှောင့်နှေးကိုမထီမဲ့မြင်မပြုဘယ်တော့မှမ။ မည်သည့်စာရွက်စာတမ်းများ, သတင်းအချက်အလက်, ပရိုဂရမ်, ဆော့ဖ်ဝဲ, ဒါမှမဟုတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဝက်ဘ်ဆိုက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာပေမည်သောအခြားပစ္စည်းအဘို့သမျှ SarcoidosisUK Disclaimer မဆိုတာဝန်ယူမှု။ SarcoidosisUK ခိုင်လုံဒါမှမဟုတ်သတင်းအချက်အလက်ကိုမဆိုအသုံးပြုသူမှထိုးစစ်မဖြစ်လိမ့်မည်ဟုအာမမခံနိုင်ပါဘူး။ အသုံးပြုသူဤဥပဒေဝက်ဘ်ဆိုက်ဒ်ကိုရယူသုံးခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်, အသုံးပြုသူက်ဘ်ဆိုက်တွင်ပါရှိသောအချက်အလက်များနှင့်စာရွက်စာတမ်းများထိုးစစ်ဖြစ်နိုင်သည်နှင့် / သို့မဟုတ်အသုံးပြုသူ၏လိုအပ်ချက်နှင့်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းမပေးစေခြင်းငှါနှင့် / သို့မဟုတ်ဖြစ်မည်အကြောင်းအန္တရာယ်ကိုယူဆကြောင်းအသိပေးစာပေါ်တွင်တင်နေသည် တိ။ သင်တစ်ဦးဆေးဝါးကုသမှုအရေးပေါ်ရှိစေခြင်းငှါထင်လျှင်, သင်၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူ, ဆရာဝန်သို့မဟုတ်အရေးပေါ်ဝန်ဆောင်မှုကိုချက်ချင်းခေါ်ပါ။ ဥပဒေရေးရာအကြောင်းပြချက်အဘို့ဤ website ကိုသာယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းရှိလူများအဘို့ဖြစ်၏ - အခြားတရားစီရင်မှုကနေလူတွေဖတ်ပါနှင့်မိမိတို့အန္တရာယ်မှာအဲဒီလိုသူတို့ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အတွက် operating ဖြစ်ကြောင်းနားလည်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုသုံးပါလျှင်။ SarcoidosisUK အဆိုပါဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်အင်္ဂလိပ်ထက်အခြားဘာသာစကားများသို့အလိုအလျှောက်ဘာသာကနေရရှိလာတဲ့မမှန်ကန်ကြောင်းသို့မဟုတ်တိသတင်းအချက်အလက်များအတွက်မဆိုတာဝန်မယူကြဘူးနှင့်ထိုကဲ့သို့သောတိလမ်းညွှန်မှု၏ရလဒ်အဖြစ်ခေါ်ဆောင်သွားမည်သည့်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများအတွက်တာဝန်ရှိကျင်းပရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
REMEMBER: Always talk to you your doctor before making any decisions about your health. If in doubt, please ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ. We would be glad to talk through your situation.
အဆိုပါ SarcoidosisUK က်ဘ်ဆိုက်မှလှူဒါန်းခဲ့ကြသူကအောက်ပါလူတွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဖွငျ့ icons Freepik မှ www.flaticon.com အားဖြင့်လိုင်စင်ဖြစ်ပါသည် CC ကို 3.0 BY
ဖွငျ့ icons Dave Gandy မှ www.flaticon.com အားဖြင့်လိုင်စင်ဖြစ်ပါသည် CC ကို 3.0 BY
ဖွငျ့ icons ဂရေဂို Cresnar မှ www.flaticon.com အားဖြင့်လိုင်စင်ဖြစ်ပါသည် CC ကို 3.0 BY
ဖွငျ့ icons Smashicons မှ www.flaticon.com အားဖြင့်လိုင်စင်ဖြစ်ပါသည် CC ကို 3.0 BY
ဓာတ်ပုံများအားဖြင့် ပတေရုသ Nutkins.